कारू च्‍युक्‍कीन [ᴴkaru ᴴtsʲuk‍kin] (var. of CH: कारू ताङगीन) क्रि. बाक्लो पार्नु thicken (sem. domains: 5.2.1.2 - खाना तयार गर्नुका चरणहरू.)
खोदा [ᴴkʰoda] ना. ढिँडो ओराल्दा पानीमा पहिले अलिकति हाल्ने पिठो small amount of flour put into water before cooking porridge (sem. domains: 5.2.1.2 - खाना तयार गर्नुका चरणहरू.)
छामेवा [ᴴtsʰamewa] (var. of CH: छा ॱमा) वि. नुन कम low salt food Cross Ref. जाक्‍चा ॱमा (sem. domains: 5.2.1.2 - खाना तयार गर्नुका चरणहरू.)
छो़रू च्‍युक्‍कीन [ᴴtsʰøru ᴴtsʲuk‍kin] क्रि.प. पाक्न दिनु let ripen (sem. domains: 5.2.1.2 - खाना तयार गर्नुका चरणहरू.)
धाप्‍जोक [ᶫtap‍dzok] (var. of SH: ग्‍याप्‍सोक) ना. फापरको पराल buck wheat hay (sem. domains: 5.2.1.2 - खाना तयार गर्नुका चरणहरू.)
धुगीन [ᶫtugin] (3sg pres: धी़क) (past: धी़जुङ) (imp: धी़) क्रि. 1उठाउनु wake, erect, cause to desert one's dwelling-place, lift, raise, cause to desert one's dwelling-place (sem. domains: 5.2.1.2 - खाना तयार गर्नुका चरणहरू, 6.8.9.1 - चोर्नु.) 2बटुल्‍नु collect, gather, glean, bring together (sem. domains: 8.3.7.8.3 - मैला, फोहोर.) 3थन्काउनु store (sem. domains: 7.5.9 - राख्‍नु.) 4टिप्नु pick, pluck
ॱलारू च्‍युक्‍कीन [ᴴlaru ᴴtsʲuk‍kin] क्रि.प. पातलो पार्नु make thin (sem. domains: 5.2.1.2 - खाना तयार गर्नुका चरणहरू.)
शामा पोक्‍कीन [ᶫsama ᴴpok‍kin] क्रि.प. खाना तल राख्‍नु remove food from the heat (sem. domains: 5.2.1.2 - खाना तयार गर्नुका चरणहरू.)
सोरा [ᴴsora] (var. of GH: छोदा) (var. of CN: छोरा )ना. खोलेमा पिठो हाल्ने flour put in soup (sem. domains: 5.2.1.2 - खाना तयार गर्नुका चरणहरू.)